ISpain esengozini yokuba yihlane ekupheleni kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uhulumeni ukhiphe ucwaningo kulo nyaka lapho ubikezela khona ukuthi u-75% wendawo usengcupheni yokuba sengozini uma izinto zingaguquki. Inamandla futhi iyethusa. Kodwa-ke, kunezindaba eziningi kakhulu ezihlobene nenhlekelele yesimo sezulu ukuthi yi-0,6% kuphela yabantu baseSpain abanentshisekelo ngayo. Futhi into ukuthi, izindaba ezinhle ziyadingeka, yebo, kodwa… Kwenzekani? Kungani abantu bengasabeli? Ibizwa ngokuthi "i-frog syndrome ebilisiwe." Isazi sefilosofi nomlobi waseFrance u-Olivier Clerc, uchaze lo mkhuba awutholile ukuwenza ube yinsumansumane. Kusebenza kubo bonke abantu, ngoba kwenzeka kithi sonke esicini esithile sempilo yethu. Isifo sexoxo esibilisiwe sisimema ukuba sicabange ngezimpilo zethu ngalesi sifaniso sangempela.
Ixoxo elingaphakathi ebhodweni elizobila laliyogxuma, lingafi. Kodwa-ke, uma ixoxo belingaphakathi ebhodweni, futhi izinga lokushisa kwamanzi lenyuka kancane kancane ngesilinganiso esingu-0,02ºC ngomzuzu, bekungeke. Inqubo ihamba kancane futhi ayibonakali, futhi lapho nje usuyazi inkinga, sekwephuze kakhulu futhi ifile ibilisiwe. Emlandweni, le nkinga yenzeke ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa. Ngezinye izikhathi kancane kancane, ngezinye izikhathi ngokucacile. Le nkinga singayithola ngisho naphakathi kwezinsizakusebenza zeplanethi yethu nokugcwala kwabantu okuhlala kithi. Ukuhlaziywa okuncane kusenza sibone ukuthi siphindaphindeke kanjani ngokushesha nangokushesha. Futhi noma kubonakala sengathi ngeke siqhubeke nokukhula ngezinga elingalawuleki kangako, sizoqhubeka nokukhula. Ngokuguquka kwesimo sezulu, imiphumela iyafana, iyabonakala, futhi siyibona njengento esekude kakhulu.
1 Izingozi zesikhathi esizayo zokuba ugwadule eSpain
2 Izindawo ezithinteke kakhulu eMedithera naseSpain
Izingozi zesikhathi esizayo zokuba ugwadule eSpain
Ngo-2090 kulinganiselwa ukuthi phakathi kuka-75% no-80% wobuso busengcupheni yokuba ugwadule. Uhlelo Lukazwelonke Lokulwa Nogwadule lusikhombisa izindawo ezivame kakhulu kulezi zinguquko. Uhulumeni uzibophezele ekuthatheni izinyathelo kuyo yonke imikhakha, ikakhulukazi leyo ebandakanya imithombo emikhulu yamanzi, amahlathi kanye nezolimo. Impendulo enikezwayo ihamba ngezindlela ezintathu. Ngakolunye uhlangothi, vimbela izindawo eziningi ekubeni ugwadule. Okwesibili, ukuvuselelwa kwezindawo eseziyizihlane. Ekugcineni futhi zithuthukise ngendlela esimeme lezo zindawo ezomile ezingenakutholwa.
Izazi ze-paleoecoel uJoel Guiot noWolfgang Cramer bamemezela kumagazini i-Science ukuthi ngo-2090 isigamu seSpain siyoba njengeSahara. Lesi simo, kanye namazinga okushisa abikezelwe, kanye namarekhodi aqhubekayo abhalisiwe njengaleli hlobo, enza izibikezelo, zibe yindidane kakhulu kwabangabazayo. Ukuphakama kwama-3 kuya ku-4 degrees eMadrid, okuzokwenza ukuthi kube nokushisa okufanayo neCasablanca. Futhi izindawo ezintsha zemvelo zizovela echibini laseMedithera elingakaze libonwe eminyakeni eyi-10.000.
Izindawo ezithinteke kakhulu eMedithera naseSpain
Ukushintsha kwemvula nakho kungesinye isici. Phakathi kwemiphakathi ethinteke kakhulu kuzoba iMurcia noMphakathi waseValencian. Yizindawo lapho kulindeleke kakhulu imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Futhi kukodwa, yonke indawo yesimo sezulu esomile nesiwomile. Phakathi kwabasolwa kakhulu ukubona imiphumela yokugwaduleka yisikhathi esiphakathi kuka-2041 no-2070. Inkomba kulindeleke ukuthi ibe phezulu kakhulu, futhi yize kucatshangwa ukuthi ezinye izinguquko ngeke zigwemeke, kuzokwenziwa yonke imizamo yokunciphisa imiphumela.
UPaco Gil, unobhala we-Organisation of the Agrarian Union, uyachaza ukuthi akukona ukuba ngama-alarmist kuphela, kodwa kubhekiswe ekubeni yiqiniso kwalokhu okwenzekayo. "Imvula yilokhu obekuyiminyaka engamashumi amabili, ngakho-ke ukusho ukuthi ugwadule lushaya phezulu njalo nsuku zonke emnyango wethu alungethusi", ngamagama akhe, maqondana nenhlekelele esivele ivele eMurcia.
Kumele sithathe izinyathelo, sonke ngokujwayelekile, futhi sazi ikusasa elisilindeleyo. Ugwadule luthola indawo eyanda ngokwengeziwe enyakatho, futhi ngeke ixazululwe ngokufafaza umgwaqo ozungezayo obonisa utshani obuluhlaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » ISpain isengozini yokuba ihlane ngasekupheleni kwekhulu leminyaka